Heshiiska Xukuumada la gashay Shirkada Favori oo maanta ka doodaya Baarlamaanka Soomaaliya | Somaale.com
Heshiiska Xukuumada la gashay Shirkada Favori oo maanta ka doodaya Baarlamaanka Soomaaliya
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ka doodaya heshiis Xukuumada Soomaaliya ay la gashay Shirkada Favori, kaasoo todobaadkii hore la hor keenay.
Mudanayaasha baarlamaanka ayaa loo qeybinaya nuqulada qoraalka heshiiska Favori loogu wareejiyay maamulka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Wasiirka Warfaafinta Boostada, isgaarsiinta iyo Gaadiidka C/llaahi Ciilmooge Xirsi ayaa hortagi doona baarlamaanka, si uu ugu faah faahiyo heshiiskaas iyo sababaha keenay in Shirkada Favori lagu wareejiyo maamulka Garoonka.
Gudoomiyaha Gudiga Warfaafinta, Boostada, isgaarsiinta iyo Gaadiidka Cabdi Cabdulaahi Xaashi ayaa todobaadkii hore ugu baaqay Xukuumada in aanay baarlamaanka horkeeno heshiis ku qoran afka Ingiriiska, isagoo dalbaday in heshiiskan lagu soo qoro afka Soomaaliga.
Mudanayaasha baarlamaanka ayaa dood kulul ka yeelanaya heshiiskan, iyagoo su’aalo weydiinaya Wsaiirka, waxaana marka su’aal weydiinta dhamaato la filayaa in Baarlamaanka cod u qaado heshiiska si loo ansixiyo.
Shirkada Favori oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa dhowaan la wareegtay maamulka garoonka diyaaradaha, kadib markii Shirkada SKA oo muddo saddex sano maamuleysay garoonka laga wareejiyay howsha.
Aabbe Muxyadiin “Xaaskeyga waa la Kufsadey, Xukunkii Shalayna wuxuu ahaa mid Cadaalodaro ah
Sheekh Muxumed Sheekh Xuseen (Marya-cadde) ayaa maanta loo caleema-saaray inuu noqdo guddoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan. 0
degmooyinka Wajeer iyo Mandheera ee dalka Kenya. oo Askar Kenyan ah lagu Qarxiyay